छात्राबासमा बस्ने गरेका विद्यार्थी विद्यालयबाट बेपत्ता ! – इन्सेक
पर्सा ०७६ भदौ १६ गते
कालिकामाई गाउँपालिका-२ का अध्यक्ष सोनालालप्रसाद चौरसियाका १३ वर्षीय छोरा भदौ १२ गतेदेखि बेपत्ता भएका छन् ।
वीरगन्जको पावर हाउस चोकमा रहेको जिएचपी माध्यमिक विद्यालयको होस्टलमा बस्दै आएका अमितकुमार चौरसिया विद्यालयबाटै सम्पर्कविहीन भएपछि विद्यालय प्रशासनले अभिभावकलाई जानकारी गराएको थियो ।
घटनाको भोलिपल्ट भदौ १३ गते अमितको परिवारले विद्यालयबाटै छोरा हराएको जानकारी जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा गराउँदै खोजीको लागि निवेदन दिएका छन् ।
पर्सा प्रहरीमा उजुरी गर्दा पनि १२ गतेदेखि बेपत्ता भएको आफ्नो छोराको बारेमा हालसम्म कुनै ठोस नतिजा आउन नसकेको परिवारले आरोप लगाएको छ ।
विद्यालयकी सञ्चालिका तथा प्रिन्सिपल रमिन्दर कौरले घटनाबारे विद्यालय प्रशासन दुःखित रहेको बताइन् ।
'हामी पनि दुःखित छौँ । कसरी घटना भयो ? मलाई पनि थाहा छैन । सिसिटिभीमा हेर्दा अपरान्ह ३ बजेर ७ मिनेटमा विद्यार्थीको छुट्टी हुँदा दुई जना विद्यार्थीको पछिपछि लागेर अमित पनि बाहिर निस्केको देखिन्छ ।'-उनले भनिन्-'उनको खोजीका लागि हामी पनि परिवारसँग समन्वय गर्दै लागि परेका छौँ ।'
'छुट्टीको बेला १ हजार ५ सय जति विद्यार्थी एकैचोटी निस्कन्छन् । त्यसमा गार्डहरूलाई पनि समस्या पर्छ ।'-प्रिन्सिपल कौरले भनिन्-'त्यसकारण अमितमाथि निगरानी गर्न सकिएन ।'
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका डिएसपी गौतम थापाले घटनाबारे उजुरी परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको बताए ।